शुक्रअस्त जारी, कसरी हुन्छ शुक्रअस्त ? (प्रभाव, गर्न नहुने र हुने कार्यसहित) | NepalDut
शुक्रअस्त जारी, कसरी हुन्छ शुक्रअस्त ? (प्रभाव, गर्न नहुने र हुने कार्यसहित)
यही ‘भदौ २८ गतेदेखि असोज ११ गते शुक्रअस्त रहेको छ । यस अवधिमा कुनै पनि पूजापाठ गर्नु हुँदैन । काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा र गुल्मीको रिडीमा सोह्रश्राद्ध लगायतको पूजा पाठ गरिँदै छ । त्यसबाट पितृमोक्ष हुँदैनन । जो जसले गर्न लागेका छन् उनीहरूलाई नै अनिष्ठ हुनेछ विभिन्न धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ ।
कसरी हुन्छ शुक्रअस्त ?
विशेषतः शुक्र सूर्यको बिम्बभित्र प्रविष्ट गरी नदेखिने हुदा शुक्र अस्त हुने गर्दछ । यस्तो अवस्था हुन सूर्य र शुक्र अत्यन्त नजिक हुनुपर्दछ । शुक्र र सूर्य एउटै राशिमा भएकोवेला अस्तको सम्भावना अधिक हुने गर्दछ । शुक्र, बुध, सूर्य १ राशिमा १ महिना बस्छन् ।
सूर्य र शुक्रको हिँड्ने गति पनि उस्तै र नजिक भएकाले यस्तो अवस्था बेला–बेलामा आइरहन्छ । शुक्र पूर्वमा अस्त भई पश्चिम दिशामा उदय हुने गर्दछ । यस्तो हुनु भनेको शुक्र सूर्यको पूर्वी विम्बबाट प्रवेश गरी पश्चिमी भागबाट नउदाएसम्मको समय हो ।
विशेषतः सूर्य र शुक्रको १० कालांशको अन्तरसम्मको समयलाई शुक्रअस्त मानिएको छ । यसैगरी सूर्य सिद्धान्तका अनुसार भने सूर्य र शुक्रको ८ कालांश अन्तर भएममा शुक्रअस्त भएको मानिन्छ ।
शुक्र बक्री हुँदा नीचासन्नमा ठूलो बिम्ब हुन्छ । उक्त बेला सूर्य र शुक्रको ८ कलाांन्तरमा नै शुक्रास्त हुने गर्दछ । अन्य समयमा सानो बिम्ब हुने भएकाले सूर्य र शुक्रको १० कालांश अन्तर अघि र पछि भएको समयसम्म शुक्र सूर्यको बिम्बभित्र प्रवेश गरी हाम्रो दृष्टिपथबाट हराउने हुन्छ ।
उक्त हराएको अवस्थाको काल नै शुक्रास्त भएको समय हो । शुक्र अस्त भएको वेला सूर्य र शुक्र एउटै राशिमा रहेका हुन्छन् । रेवतीदेखि मृगशिरा नक्षत्रसम्म चन्द्रमा रहेको वेला पनि अन्ध शुक्र हुने गर्दछ । यस्तो अन्ध शुक्रको भने कुनै दोष लाग्दैन भनी शास्त्रमा बताइएको पाइन्छ ।
शुक्रअस्तको प्रभाव के ?
शुक्र अस्त भएपछि शुक्र ग्रहबाट आउने तत्त्व हामीमा प्राप्त हुँदैन । शुक्र विशेषतः मज्जा तत्व प्रदान गर्ने ग्रह हो । कालो वर्णवाला, कालो केश, सुखी, सुन्दर, कफ वायु प्रकृतिको, मृदुभाषी, अधिक वीर्यवाला शुक्र हुन्छ ।
शुक्र अस्त भएको अवस्थामा वायुमा पनि विकार हुन सक्छ । किनकि शुक्रले वायुको पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ अर्थात् भनौ यो वायुकारक ग्रह हो ।
कला साहित्यका साथै प्रेम तत्त्वको कमी पनि शुक्र अस्तमा हुने गर्दछ । शुक्रअस्तको प्रभाव जन्मकुण्डलीमा शुक्रको अवस्था अनुसार भिन्न भिन्न हुने गर्दछ । शुक्र दशा चलिरहेका व्यक्तिलाई शुक्रले जुन फल जति प्रदान गर्नु पर्ने हो सो प्राप्त नहुन सक्ने स्थिति पनि रहन्छ ।
शुक्रास्तमा कस्ता कार्य गर्नु हुदैन ?
अस्त भएको वेलामा शुक्र निर्वल हुने हुँदा विवाह, व्रतबन्ध आदि शुभकर्म गर्नु हुँदैन भनी शास्त्रले निर्देश गरेको छ ।
कुवा, वगैँचा, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, देवताको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, व्रत प्रतिष्ठा, व्रतको आरम्भ, वधूप्रवेश, महादान, सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान (केशान्तककर्म), नवान्न भक्षण, प्रथमपटक उपाकर्म, वेदव्रत, काम्य वृषोत्सर्ग, समयमा संस्कार हुन नसकेका बाकका संस्कार, देवताको प्रतिष्ठा, दीक्षा मन्त्र ग्रहण, व्रतबन्ध, विवाह,मुण्डन, पहिलो पटक तीर्थ यात्रा, सन्यास ग्रहण, राजाको दर्शन, राजाभिषेक, यात्रा, विशेष परीक्षा आदि कुरा त्याज्य हुन्छन् भनी मुहूर्त्तचिन्तामणिमा उल्लेख छ ।
कस्ता कार्य शुक्रास्तमा गर्नु हुन्छ ?
विशेषतः शुक्र अस्त प्रकृतिको १ नियमित चक्र हो । यस्तो बेला बेलामा भइरहन्छ । शुक्र अस्त भएको वेलामा आफ्ना नित्य कर्म गर्न भने कुनै बाधा व्यवधान रहँदैन । यसैगरी नित्य कर्म अन्तर्गत पर्ने श्राद्ध, वार्षिकी, लिंदै आएका व्रत उपासना पनि रोकिदैनन् ।
नैमित्तिक कर्म अन्तर्गत अइपर्ने नामाकरण, औध्र्वदेहिक कर्म, अत्यावश्यक कर्म, ग्रहशान्ति, रोग शान्ति आदि कर्म गर्न सकिन्छ । शान्ति कर्मका निीम्त पनि छुट दिएको पाइन्छ ।
यसैगरी महिना तोकेर भनिएका कर्म गर्न पछि छुट दिइएको छ । यसैगरी शुक्र अस्तमा सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्न प्राशन कार्य पनि गर्नुहुन्छ दोष लाग्दैन भनी बताइएको छ ।
नित्य कर्म, ग्रहशान्ति, नैमित्तिक कर्म अन्तर्गतका सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, शान्ति कर्म, गयाश्राद्धादि कार्य शुक्र अस्त भए पनि गर्दा कुनै दानेष नलाग्ने कुरा शास्त्रले बताएको पाइन्छ ।
सूर्यको विम्बमा परि शुक्र हाम्रो दृष्टिपथमा नआएको अवस्तथा नै शुक्रास्तमा हो । सूर्य र शुक्र एउटै राशिमा भएका बेला यस्तो अस्त हुने गर्दछ ।
शुक्र अस्त हुँदा शुक्रजन्य प्रभाव कम हुने भएकाले विवाह, व्रतबन्ध, महायज्ञ आदि गरिएको ठूला काम्य कर्म गर्न निषेध गरिएको छ भने नित्यकर्म, ग्रहशान्ति, नामकाकरण लगायत नित्यकर्म पनि गर्नु हुने शास्त्रीय निर्णय पाइन्छ ।